Omeprazole (အိုမီပရာဇော) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Omeprazole (အိုမီပရာဇော)
ုOmeprazole (အိုမီပရာဇော) ကဘာလဲ။
Generic Name: Omeprazole (အိုမီပရာဇော) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Omeprazole (အိုမီပရာဇော) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Omeprazole ကို အချို့သော အစာအိမ်ပြဿနာများ နှင့် အစာရေမြို (esophagus) ပြဿနာများအတွက် အသုံးပြုပါသည်။၎င်းသည် အစာအိမ်မှ ထုတ်သော အက်ဆစ်ကို လျော့နည်းစေခြင်းဖြင့် ရင်/လည်ချောင်းပူခြင်း၊အစာ/ရေမြိုရခက်ခြင်း နှင့် ကြာရှည်စွာ ချောင်းဆိုးခြင်းတို့ကို သက်သာစေပါသည်။ Omeprazoleသည် အက်ဆစ်ကြောင့် ထိခိုက်ထားသော အစာအိမ်နှင့် အစာရေမြိုတို့ကို ပြန်လည်သက်သာကောင်းမွန်စေခြင်း၊အနာဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊အစာရေမြိုကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးခြင်း စသည့် အကျိုးအာနိသင်များရှိပါသည်။Omeprazoleသည် Proton Pump Inhibitors (PPIs) ဟုခေါ်သော ဆေးအုပ်စုဝင် အမျိုးအစား ဆေးတမျိုးဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် Omeprazoleကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်လျှင် တပတ်လျှင် ၂ရက် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော (အက်ဆစ်ကြောင့်) ရင်ပူခြင်းများအတွက် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလိုသော Omeprazoleဆေးများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် အာနိသင်အပြည့်အဝပြရန် ၁ရက်မှ ၄ရက်အထိကြာသဖြင့် (အက်ဆစ်ကြောင့်) ရင်ပူခြင်းကို ချက်ချင်းသက်သာစေမည်မဟုတ်ပါ။
ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ အသုံးပြုပါက သင့်အနေဖြင့် ဤဆေးကို အသုံးပြုသင့်ကြောင်းသေချာစေရန် ဆေးဗူးတွင်ပါဝင်သော အညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။ ဆေးထုတ်လုပ်သူများသည် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ပြောင်းလဲတတ်ကြလေ့ရှိ သဖြင့် သင်အသုံးပြုနေကျ တံဆိပ်ဖြစ်လျှင်ပင် မည်သည့်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ကြောင်း သိရှိနိုင်ရန် အညွှန်းကို ဖတ်ပါ။ အချို့သော ဆေးများသည် ဆေးတံဆိပ် ခပ်ဆင်ဆင်တူသော်လည်း ပါဝင်သော ပစ္စည်းများမှာမူ မတူညီဘဲ ရည်ရွယ်ချက်လည်း မတူညီတတ်ပေ။ မှားယွင်းသော ဆေးကို အသုံးပြုမိပါက သင့်ကိုဘေးဥပါဒ်ဖြစ်စေမည်။
Omeprazole (အိုမီပရာဇော) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးကို စတင်အသုံးမပြုခင် သို့မဟုတ် ဆေးကုန်သွား၍ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တိုင်းတွင် ဆေးဆိုင်မှ ပေးလိုက်သည့် ဆေးညွှန်းစာရွက်ကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုပါ။ မရှင်းလင်းသည်များ ရှိလျှင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ကို မေးမြန်းပါ။Omeprazole ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် အတိုင်း (အများအားဖြင့် တနေ့တကြိမ်) အစာမစားမီ သောက်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အရ မဟုတ်ဘဲ မိမိဖာသာ သုံးစွဲခြင်းဖြစ်လျှင် ဆေးအညွှန်းတွင်ပါသော အသုံးပြုပုံကို သေချာစွာဖတ်ရှုပါ။ ဆေးပမာဏ အနည်းအများ နှင့် သောက်ရမည့် ကာလအတိုင်းအတာသည် သင်၏ ရောဂါအခြေအနေ နှင့် ဆေးကို တုန့်ပြန်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ ကလေးများတွင် ကိုယ်အလေးချိန်ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ဆေးပမာဏ သို့မဟုတ် အကြိမ်ရေကို မိမိသဘောဖြင့် မတိုးပါနှင့်။ မရှင်းလင်းသည်များ ရှိလျှင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ကို မေးမြန်းပါ။
ဆေးပြားကို မခြမ်းပါနှင့်၊ဝါးမစားပါနှင့်၊ချေမပစ်ပါနှင့်။ ဆေးတလုံး လုံးကို ရေတဖန်ခွက်အပြည့်ဖြင့် သောက်ချပါ။ လိုအပ်လျှင် Omeprazole နှင့် အတူ antacid ဆေးများကို သုံးစွဲကောင်းသုံးစွဲရပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် sucralfate ကို ပါ သောက်ရမည်ဆိုလျှင် Omeprazole ကို sucralfate မသောက်မီ အနည်းဆုံး နာရီဝက်ခန့်စောသောက်ပါ။ ဆေးအာနိသင် အများဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ရစေရန် ဆေးကို အချိန်မှန်မှန် သောက်သုံးပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တူညီသော အချိန်တခုတည်းတွင် သောက်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ရောဂါသက်သာသွားသည့်တိုင် Omeprazole ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့် ကာလပြည့်သည်အထိ အပြည့်အဝ သောက်ရပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အရ မဟုတ်ဘဲ မိမိဖာသာ သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါက (ဆရာဝန်မှ အထူးတလည်ညွှန်ကြားထားခြင်း မရှိလျှင်) ဆေးကို ၁၄ရက်ထက် ပို၍ မသောက်ရ။
မသက်သာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အရ မဟုတ်ဘဲ မိမိဖာသာ သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါက ၁၄ရက်ကြာ ဆေးသောက်ပြီးသည့်တိုင် ရင်/လည်ချောင်းပူခြင်း မသက်သာလျင် သို့မဟုတ် သင့်အနေဖြင့် Omeprazole ကို ၄လတခါထက်ပို၍ ခပ်စိပ်စိပ် သောက်နေရလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။ ဆိုးရွားသော ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု ယူဆပါက အမြန်ဆုံးဆေးကုသမှု ခံယူပါ။
Omeprazole (အိုမီပရာဇော) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Omeprazole ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Omeprazole ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Omeprazole ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Omeprazole ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Omeprazole ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Omeprazole (အိုမီပရာဇော) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ Omeprazole ဆေးသောက်သုံးမည်ဆိုလျင် အောက်ပါအခြေအနေများကို သတိထားသင့်သည်။
Omeprazole ဆေးနှင့် သို့မဟုတ် အခြားသောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန်ကို သေချာစွာအသိပေးပါ(ဆေးသာမက အစားအသောက်၊ဆိုးဆေး၊အစားအစာများကို တာရှည်ခံအောင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများပါ အကျုံးဝင်သည်)။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်ဆေးမဟုတ်ပါက ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များအရ အသက်၁နှစ်မှ ၁၆နှစ်အရွယ် ကလေး များတွင် Omeprazole ၏ အသုံးဝင်မှု ဆေးစွမ်းကို ကန့်သတ်စေမည့် ပြဿနာမရှိသေးပါ။ အသက်၁နှစ်အောက် ကလေးများတွင် ဆေး၏ အကျိုးအာနိသင်ထိရောက်မှု သို့မဟုတ် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို မသိရှိနိုင်ပါ။
လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များအရ သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် Omeprazole ၏ အသုံးဝင်မှု ဆေးစွမ်းကို ကန့်သတ်စေမည့် ပြဿနာမရှိသေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Omeprazole (အိုမီပရာဇော) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Omeprazole (အိုမီပရာဇော) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါက Omeprazole သောက်သုံးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
-သွေးတွင်း မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓါတ် နည်းခြင်း (မူးဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊နှလုံးခုန် မြန်ခြင်း၊မမှန်ခြင်း၊ကြွက်သားများ အကြောဆွဲခြင်း၊ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ကြွက်သားများ အားနည်းခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်း၊လည်ချောင်းထဲ တစ်ဆို့ဆို့ခံစားရခြင်း၊တက်ခြင်း။
-နှာစေး၊နှာချေ၊လည်ချောင်းနာ အစရှိသော သာမန်အအေးမိဝေဒနာများ။
ဘယ်ဆေးတွေက Omeprazole (အိုမီပရာဇော) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Omeprazole ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အောက်ဖော်ပြပါဆေးတွေကိုသုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင် Omeprazole ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ သင့်ဆရာဝန် အနေနဲ့ Omeprazole ကို အသုံးမပြုတော့တာဘဲဖြစ်ဖြစ် သင်သုံးစွဲနေတဲ့ အခြားဆေးတွေကို ပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများကို ယေဘုယျအားဖြင့် Omeprazole နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး။ သို့သော် အချို့သော အခြေအနေများတွင်မူ သုံးစွဲကောင်းသုံးစွဲပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးများသည် Omeprazole ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပို၍ဆိုးကောင်းဆိုးစေနိုင်သည်။ သို့သော် အတူတကွ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ကုသမှုရလာဒ်ကိုလည်း ရစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Omeprazole (အိုမီပရာဇော) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Omeprazole က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Omeprazole (အိုမီပရာဇော) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Omeprazole ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ }
-အသည်းရောဂါ —–> သတိဖြင့်အသုံးပြုပါ။ ခန္တာကိုယ်ထဲမှ ဆေးစွန့်ပစ်မှုကို နှေးစေသဖြင့် ဆေး၏အာနိသင်မှာ ခန့်မှန်းထားသည်ထက် များလာနိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Omeprazole (အိုမီပရာဇော) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
၂၀ မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျှင် တကြိမ် အစာမစားမီ သောက်ပါ။ လူနာအများစုတွင် ၄ပတ်မှ ၈ပတ်အတွင်း အနာသက်သာပျောက်ကင်းသွားလေ့ရှိသည်။
၄၀မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျင် တကြိမ် အစာမစားမီ သောက်ပါ။ သောက်ရမည့် ကာလမှာ ၄ပတ်မှ ၈ပတ်အထိဖြစ်သည်။
၂၀ မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျှင် တကြိမ် အစာမစားမီ သောက်ပါ။ ဆေးအပေါ်တုန့်ပြန်မှုနှင့် ဆေးဒါဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့အပေါ် မူတည်ပြီး ဆးပမာဏကို တရက်လျှင် ၄၀မီလီဂရမ် အထိတိုးပေးနိုင်သည်။Erosive esophagitis အစာရေမြိုရောင်ရောဂါအတွက်
Omeprazole ကို အများဆုံး ၁၂လအထိ သောက်ခြင်းကိုသာ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ထားပါသည်။
ကနဦးဆေးပမာဏ ——–> ၆၀မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျှင် တကြိမ်သောက်ရမည်။ လူနာအခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ဆေးပမာဏကို ချိန်ဆနိုင်သည်။
ဆက်လက်ထိန်းထားရန်ဆေးပမာဏ ——–> ၁၂၀ မီလီဂရမ်အထိ တနေ့၃ကြိမ်ပေးနိုင်သည်။၈၀ မီလီဂရမ်ထက်ပိုလျှင် ခွဲပြီးပေးသင့်သည်။
ကနဦးဆေးပမာဏ ——-> ၂၀မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျင် တကြိမ် အစာမစားမီ သောက်ပါ။ သောက်ရမည့် ကာလမှာ ၄ပတ်မှ ၈ပတ်အထိဖြစ်သည်။ လိုအပ်လျှင် ၄၀ မီလီဂရမ်အထိ တိုးနိုင်သည်။
ဆက်လက်ထိန်းထားရန်ဆေးပမာဏ ——–> ရောဂါနောက်တဖန် ပြန်ပေါ်မလာစေရန်အတွက် တနေ့လျှင် ၁၀ – ၂၀ မီလီဂရမ်ကို ကာလရှည် စွဲသောက်နိုင်သည်။
Muliple Endocrine Adenoma အတွက်
ကနဦးဆေးပမာဏ ——-> ၆၀မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျင် တကြိမ် အစာမစားမီ သောက်ပါ။ ဆေးအပေါ်တုန့်ပြန်မှုနှင့် ဆေးဒါဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့အပေါ် မူတည်ပြီး ဆးပမာဏကို ချိန်ဆရမည်။
ဆက်လက်ထိန်းထားရန်ဆေးပမာဏ ——–>၁၂၀ မီလီဂရမ်အထိ တနေ့၃ကြိမ်ပေးနိုင်သည်။၈၀ မီလီဂရမ်ထက်ပိုလျှင် ခွဲပြီးပေးသင့်သည်။
Systemic Mastocytosis အတွက်
(အက်ဆစ်ကြောင့်) ရင်ပူခြင်းကို ကာကွယ်ရန် : ၂၀မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျင် တကြိမ် အစာမစားမီ သောက်ပါ။ စုစုပေါင်း ၁၄ ရက်သောက်ရမည်။
ကလေးတွေအတွက် Omeprazole (အိုမီပရာဇော) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
GERD :0.7mg/kg/dose ကို တနေ့လျှင် တကြိမ်တိုက်ခြင်းဖြင့် အစာအိမ်နှင့် အစာရေမြိုတို့တွင် pH ပမာဏ ၄ထက်နည်းနေသော အချိန်ကို နည်းပါးစေသည်။ ထို့အပြင် လေ့လာမှုတခုအရ မွေးကင်းစကလေး ၁၀ဦးတွင် အစာအိမ်မှ အက်ဆစ်များ အထက်သို့ဆန်တက်မှုကို လျော့နည်းသက်သာစေသည်။ 1 – 1.5 mg/kg/day ထက်ပိုသောက်ရသော လူနာများလည်းရှိသည်။
အသက် ၁နှစ်မှ ၁၆နှစ်အထိ :
GERD၊ အနာများ၊ အစာရေမြိုရောင်ခြင်း :
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူများမှ အကြံပြုချက် :
ကိုယ်အလေးချိန်5– 10 kg : ၅ မီလီဂရမ် နေ့စဉ် တနေ့တကြိမ်
10 – 20 kg : ၁၀ မီလီဂရမ် နေ့စဉ် တနေ့တကြိမ်
20kg ထက်များသော ကလေးများ : ၂၀ မီလီဂရမ် နေ့စဉ် တနေ့တကြိမ်
1mg/kg/dose ကို နေ့စဉ် တနေ့လျှင် တကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ်။
Helicobacter pylori ကြောင့် ဖြစ်သော အူသိမ်အနာကို ပူးပေါင်းကုသရန်အတွက် (ပိုးသတ်ဆေးများဖြစ်ကြသော clarithromycin သို့မဟုတ် clarithromycin + amoxicillin နှင့် တွဲဖက်သောက်ရန်) :
ကိုယ်အလေးချိန် 15 – 30 kg : ၁၀ မီလီဂရမ် နေ့စဉ် တနေ့နှစ်ကြိမ်
30kg ထက်များသော ကလေးများ : ၂၀ မီလီဂရမ် နေ့စဉ် တနေ့နှစ်ကြိမ်။
မှတ်ချက်။ ။ အသက်၁နှစ်အောက် ကလေးများတွင် Omeprazole အသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးအပြစ်များနှင့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို မသိရှိနိုင်ပါ။ ထို့အတူ ကလေးများတွင် Omeprazole ကို GERD ရောဂါအား ကုသခြင်း နှင့် Erosive esophagitis ရောဂါကိုကုသရန်မှတပါး အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အသုံးပြုပါက Omeprazole ၏ အကျိုးအပြစ်များနှင့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို မသိရှိနိုင်ပါ။
GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) အတွက် :
Omeprazole (အိုမီပရာဇော) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Omeprazole ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးတောင့် : ၁၀၊ ၂၀၊ ၄၀ မီလီဂရမ်
ရေနှင့်ဖျော်သောက်ရသော ဆေးမှုန့် : ၂.၅ မီလီဂရမ်၊ ၁၀ မီလီဂရမ်။
Omeprazole ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇွန် 26, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 19, 2017
Omeprazole http://www.webmd.com/drugs/2/drug-3766/omeprazole- oral.
နာတာရှည် ချောင်းဆိုးရခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းများ ။ ။